ရွှေလရောင် – Page 177
ဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်နေရင် အထူးသတိထားကြပါ…။ မပေါ့ဆသင့်တဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာ နိမိတ်လက္ခဏာများ
” ဆီးပူ ဆီးနီ ဆီးအောင့် ဆီးကျန် ကျောက်တည် ကျောက်ကပ်အားနည်း နေပါသလား”
“အသက်ကလည်း ကြီးလာပြီမို့ တရားဓမ္မတွေ လေ့လာနေတယ်” ဆိုတဲ့ စိုးသူ
slyadmin January 10, 2018
“အသက်ကလည်း ကြီးလာပြီမို့ တရားဓမ္မတွေ လေ့လာနေတယ်” ဆိုတဲ့ စိုးသူ နာမည်ကျော် မင်းသား၊ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ စိုးသူကတော့ အသက်ကလည်း ၅၃ နှစ်ထဲ ရောက်လာပြီမို့ အဘိဓမ္မာတွေ လော့လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စိုးသူက လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ခန့်က အင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေလည်း အောင်မြင်ခဲ့သလို၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း…
💑အချစ်ဆုံး ချစ်ခင်ပွန်း…. ဒီည ဒီစာကို ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ..💑
💑အချစ်ဆုံး ချစ်ခင်ပွန်း…. ဒီည ဒီစာကို ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ..💑 #မိသားစုအတွက်အပြုံး #မိန်းမ ရော့မင်းကြိုက်တာဝယ် ကြိုက်တာသုံးဆိုတဲ့၊ စကားထက်…. မိန်းမ အပြင်အတူသွားကြမယ်လေ ပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့၊ စကား အသုံးပြုမှုလေးက ပိုနွေးထွေးကျေနပ်စေရတာပါ။ #မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှမဆုံတာဆိုတဲ့၊ စကားထက်….. မိန်းမခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ ဗိုက်ဆာပေမယ့် အလုပ်မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊…
ထင်ယောင်ထင်မှား ဝေဒနာများနှင့် ပုန်းကွယ် ခိုအောင်းနိုင်သော ကင်ဆာရောဂါ~~~
ထင်ယောင်ထင်မှား ဝေဒနာများနှင့် ပုန်းကွယ် ခိုအောင်းနိုင်သော ကင်ဆာရောဂါ~~~ ခေါင်းကိုက်တာ အချိန်အတော်ကြာ ဘယ်လိုမှ မသက်သာရင်၊ မကြာခဏ သတိလစ်တာ သို့မဟုတ် တက်သွားတာမျိုးဖြစ်ရင်၊ စကားပြောတာ လေးလံလာတာ၊ ကိုယ်တစ်ခြမ်း သိုမဟုတ် ကိုယ်တစ်ပိုင်း အားနည်းလေးလံလာရင်… သတိပြုစရာ ဦးနှောက်ကင်ဆာ (brain tumour) သို့ မဟုတ်…
အပြောင်းအလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စတင်ရတဲ့အရာ
‌အပြောင်းအလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စတင်ရတဲ့အရာ ကျွန်မက ငယ်ငယ်ကတည်းက အသားမည်းမည်း၊ ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ အရုပ်ဆိုးဆိုး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ကျွန်မကမ္ဘာငယ်လေးထဲမှာ စာအုပ်တွေပဲရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ လူနဲ့မလိုက်အောင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အိပ်မက်တွေလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ကူးယဉ်အိပ် မက်တွေထဲမှာတော့ ကျွန်မအတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိသလို ဘဝကလည်း ပျော်စရာပေါ့။ ကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ရောက်တော့လည်း ကျွန်မရဲ့ကျောင်းသူဘဝက ပျော်စရာမကောင်းလှပါ ဘူး။ စာသင်ရတာပျော်ပေမဲ့…
တပတ်အတွင်း မျက်နှာလေး ဝင်းပလာအောင်လုပ်နည်း
slyadmin January 9, 2018
တပတ်အတွင်း မျက်နှာလေး ဝင်းပလာအောင်လုပ်နည်း မျက်နှာကို တပတ်အတွင်း ကြည်လင်ဝင်းပလာအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတခုရှိတယ်။ လုပ်ရ မခက်သလို အိမ်မှာတင် အလွယ် ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ သုံးရတဲ့ ပစ္စည်းတွေက သုံးမျိုးတည်းရယ်။ ကြက်ဥ(အကာ)ရယ်၊ ခါကြက်ဥ(မုန်လာဥနီ)ရယ်၊ နနွင်းနည်းနည်းရယ် ထည့်သုံးရုံပဲ။ လုပ်ရလွယ်တယ်ဆိုပြီး အထင်မသေးနဲ့။ ၂-၃ကြိမ်ခန့်လုပ်ရုံနဲ့ ထူးခြားတဲ့…
သင့်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေတဲ့ ညဖက်မှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ
သင့်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေတဲ့ ညဖက်မှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ ညဖက်မှာ သင်ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုပြီး တက်စေပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် အရာတွေကို လုပ်နေမိရင် ချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်ပါနော်။ ညဖက်အိပ်ရေးဝအောင် မအိပ်ခြင်း ညဖက်အိပ်ရေးဝအောင်မအိပ်တာဟာ သင့်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ ဗိုက်ပိုဆာစေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလို ခံစားရစေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်…
အသည်းကင်ဆာ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း
အသည်းကင်ဆာ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း အရက်​အရမ်း​သောက်​ခဲ့တဲ့အစ်ကို တ​ယောက်​ အခု​တော့ အသဲမှာ အနာဖြစ်​လို့ ​ဆေးရုံခနခဏ တက်​​နေရပြီ။​ဆေးရုံတက်​ ​ဆေး စစ်​လိုက်​​တော့ အသဲကင်​ဆာတဲ့။ အသဲကင်​ဆာဖြစ်​​နေတဲ့ အစ်ကို အတွက်​ သူမိသားစုတခုလုံးက စိတ်​မချမ်းမသာ ဖြစ်​​နေရပြီ။ တမိသားစုလုံးလည်း မနားရ။​ဆေးရုံတက်​​တော့ အ​စောင့်​က နှစ်​​ယောက်​​စောင့်​ရတယ်​။​ သွေးသားဖြစ်​​နေ​တော့လည်း ​ရောဂါ​ပျောက်​ရေး…
အသားဖြူချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ……… အသားဖြူတာဟာမိန်းကလေးတော်တော်များများလိုလားတောင့်တတဲ့အလှအပတခုဖြစ်ပါတယ် ညိုချောတွေရှိပေမဲ့ ဖြူချောတွေလောက်သိပ်မျက်နှာမပွင့်ကြပါဘူး အသားဖြူစေတဲ့အလှကုန်တွေပေါသလို သဘာဝဖြစ်အသားဖြူနည်းတွေလဲရှိပါတယ် အသားဖြူချင်သူတွေအတွက် သိသလောက်အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ် *သဘာဝဖြစ် အသားဖြူပစ္စည်းများ သဘာဝဖြစ်အသားဖြူပစ္စည်းတွေနဲ့ အသားဖြူအောင်လုပ်နည်းတွေအရင်ဖော်ပြသွားပါမယ် ကရိကထလဲမများ ဈေးလဲမကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အများသူငါလက်လှမ်းမီသုံးလို့ရတာကို ဦးစားပေးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် *လိမ္မော်ခွံနဲ့ အသားဖြူနည်း လိမ္မော်သီးအခွံကို နေပူထဲလှမ်းပေးပါ လုံးဝခြောက်သွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ ကြိတ်ပီးပေါင်ဒါကိုအမှုန့်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါ ပြီးမှနို့အစိမ်းနဲ့ရောပြီး ပျစ်ခဲရအောင်ဖျော်ပါ အဲဒီအရည်ကို…
အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဒီလိုစားမယ်
အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဒီလိုစားမယ် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုရဲ့ ၅ % ကနေ ၁၀ ရ ဟာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၂၀ % က ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ၃၀ % ကတော့ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတာကြောင့်ဖ်ြစကြပြီး ၃၅ % ကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွှတ်တဲ့အစားအစာတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ သုတေသနပြုချက်အရအနီရောင်အသားတွေဟာ…
သူဌေး နဲ့ အိမ်ဖော်မလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း
သူဌေး နဲ့ အိမ်ဖော်မလေးတစ်ယောက် ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း ထိုနေ့ညက အဖြစ်အပျက်က မလွင်ကြည့်ဖူးသည့် မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော် မလွင်ကြုံနေရသည်က ဗီဒီယိုထဲတွင် သရုပ်ဆောင်နေခြင်း မဟုတ်။ အမှန်တကယ် ကျားရှေ့ မှောက်လျက်လဲနေခြင်းပင်။ “အဲဒီညက အလုပ်ဝင်ပြီး လေးရက်မြောက်ည။ ဂျပန်ကြီးက…
Previous page Page 1 … Page 176 Page 177 Page 178 … Page 261 Next page
ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးမယ်နော်။ အမှန်တော့ မတင်ချင်ပါဘူး။ အဖွားဖြစ်နေတဲ့ရောဂါလူသိမှာစိုးလို့မတင်ချင်ပါဘူး။